Soomanni Maali - NuuralHudaa
Afaan Arabaatiin Soomana jechuun if qabuudha.
Shari’aatti Nyaataa fii dhugaatii akkasumas waan soomana balleeysurraa if qabuun Rabbiif Ibaadaa godhuudha.
Sadarkaa Soomanni qabu:
Soomanni sadarkaa guddoo qaba. Warri Soomanaa guyyaa qiyaamaa hulaa kophaa tan Ar-Rayyaan ja’amtuun yaamamuuf taa’an. Galata Soomanni qabu Rabbuma qofaatu beeka. Rabbiin guutumaan guututti waan warra Soomanaatiif qopheeyse nu hin beeysisne garii qofa irraa nuuf akeeke.
Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam Hadiisa kheeysatti waan Rabbiin soomana laalchisee je’e hoggaa dubbatu akki je’e:
“Rabbiin ol tahe Soomanni anaafi, anaatu galata Isaa deebisa je’e”
Hadiisa Bukhaarii fii Muslim Gabaasan Kheeysatti Nabiyyiin sallallaahu aleeyhi wasallam:
“Jannata kheeysa Hulaa Al-Rayyaan ja’amtuutu jira, Guyyaa Qiyaamaa Warra Soomaneetu Isiidhaan Seena, Isaan malee Namni biraa Tokkolleen hin seenu. Warri Sooamanaa mee? Ja’anii yaamaniin; Hogga Isaan seenan hulaan sun ni cufamti.”
Bukhaarii: 1896 muslim: 1152
Soomanni guyyaa qiyaamaa magantaa dhaabbattee siif falama. Rasuull sallallaahu aleeyhi wasallam: “Soomanaa fii Qur’aanni guyyaa qiyaamaa gabrichaaf magantaa seenan. Soomanni ni ja’a: Yaa Rabbi! Nyaataa fii feedhii Isaa irraa Isa dhorge, Magantaa Isaan na dhaabi. Qur’aannis ni ja’a: Yaa Rabbi! Halkan rafuun isa dhorge, Magantaa Isaaf na godhi. Akkasitti lamaanuu Isaaf magantaa seenan.”
Sahiihul Jaamii’i: 3882
Baga Gammade Baatii Ramadaanaa geeysee
Baatii Quraanni kheeysatti bu’e, Baatii Araaramaa.
Baatii Salaata Taraawii fii Tahajjudaa.
Baatii Sheeyxaanni hidhamtu.
Baatii Hulaaleen Jannataa banamtu.
Baatii Hulaaleen Jahannam cufamtu.
Baatii Arjummaa fii Tola Olinsaa.
Baatii Ibiddarraa Itti Bilisooman.
Baatii Halkan Leeylatul Qadrii kheeysa jiru.
Baatii galanni dalagaa Gaariin dachaa tahu.
Baatii tana gahuu keetiif gammadi. Irraa fayyadamuufis karoorfadhuu itti seeni.
Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e:
“Baatii Ramadaanaa hoggaa seene, Sheeyxaanni ni hidhamti, Hulaaleen Ibiddaa ni cufamti, Hulaaleen Jannataa ni banamti. Lallabaan ni Lallaba: “Yaa Nama kheeyrii barbaadu gama kheeyrii as gargali, Yaa Nama hamtuu barbaadu hamturraa gabaabbadhu. Warra Rabbiin Ibiddarraa Bilisoomsuutu jira halkan hunda kheeysatti.”
Soomanni Ramadaanaa arkaana Islaamaa shanan irraa tokko. Rabbiin Qur’aana kheeysatti akka soomannu nu ajajee jira.
Rabbiin ol tahe akki je’e: “Yaa warra amantan Soomanni akkuma warra isiniin duraa irratti dirqama godhame isnirrattillee dirqama godhamee jira.”
Ramadaana soomanuun dirqama kan godhame bara Hijiraa lammaffaa baatii Sha’baan kheeysa ture.
October 16, 2021 sa;aa 5:34 pm Update tahe